स्वयंसेवामा युवाको आकर्षण किन ??? | Lumbini Aawaz
स्वयंसेवामा युवाको आकर्षण किन ???
– राजन भण्डारी
सामान्यतया स्वयंसेवा भन्नाले आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक कुनै पनि पक्षबाट लाभको आशा नराखी स्वईच्छाले गरीने सेवा भन्ने बुझिन्छ ।स्वयंसेवा बिना कुनैपनि कार्य गर्न सम्भव छैन ।स्वयंसेवा मात्र त्यस्तो कार्य हो, जुन कार्य गर्दा मानिसहरु पुर्ण रुपमा आत्मा सन्तुष्टीको महशुश गर्नुको साथै आफूले गरेको कार्य बाट आत्मासम्मान पनि पाउने गर्दछ ।यति मात्र होईन, स्वयंसेवामा सबै किसिमको कार्यको उचित सम्मान पनि हुने गर्दछ , त्यसैले स्वयंसेवामा युवाहरुको आकर्षण बढेको देख्न सकिन्छ ।
कानुनको नजरमा १६ वर्ष पुरा भैसकेका उमेर समुहका नागरीकहरुले स्वयंसेवा गर्ने व्यवस्था भएता पनि युवा उमेर समूहका मानिसहरु स्वयंसेवामा अग्रपङ्तीमा आउछन । युवाहरु समाज रुपान्तरणका सम्बाहक हुन् । युवाहरु समाज प्रति उत्तरदाहीबोध हुन, समाजमा केही परिवर्तन ल्याउनको लागि उनीहरु स्वयंसेवा गर्न चाहान्छन् । आफुमा भएको सीप र ज्ञानले समाजका अरु व्यत्तिहरुलाई दक्ष बनाई समाजलाई उन्नती र प्रगती तर्फ लम्काउन उनीहरु स्वयंसेवा गर्छन । युवाहरुमा जोश र जाँगर हुन्छन , त्येसैले उनीहरु समाजमा रहेका चुनौतीहरुको सामना गर्न सवयंसेवा गर्न रुचाउँछन् ।
स्वयंसेवा गर्दै गर्दा सामाजिक सद्भावना बढाउन पाउँछन् । समाजमा रहेका विभिन्न सामाजिक र साँस्कृतिक, धार्मिक कुराहरु सिक्न पाउँछन्। समाजमा रहेका विकृती र विसंगती विरुद्ध आवाज उठाउन र चुनौतीको सामना गर्न पनि युवाहरु स्वयंसेवा गर्न रुचाँउछन् ।
अन्तत: समाजमा आफ्नो अस्तित्वबोध गराउन, व्यवसायिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र आफ्नो सकृया जीवन बिताउन युवाहरु स्वयंसेवा गर्न आकर्षीत हुन्छन ।
(लेखक राजन भण्डारी रेडक्रस स्वयंसेवक हुन् ।)